Aqoon isweydaarsiga nadiifinta budada khudradda ee fuuq baxa ee warshada Ruisheng ayaa la casriyeeyay oo la howl galiyay
Budada qudaartu waa khudradda ugu horreysa ee fuuqbax qalalan, ka dibna la sii burburiyo, budada khudradda ayaa ah fidinta wax soo saarka khudradda ee fuuqbaxay. Warshadeenu waxay bilawday inay kor u qaaddo aqoon isweydaarsiga budada khudradda ee fuuqbaxay dhamaadka sanadka 2020, dhawaana waa la casriyeeyay oo wax soo saar ayaa la saaray. Our f ...Akhri wax dheeraad ah »
2021 SIAL Shiinaha Bandhigga Cuntada iyo Cabitaanka Caalamiga ah ayaa loo qabtay sidii loogu talagalay
Mid ka mid ah saddexda carwadood ee adduunka ugu sarreeya, oo ah shirkii sanadlaha ahaa ee Chain Warshadaha Cuntada Adduunka, SIAL Shiinaha Bandhigga Caalamiga ah ee Cuntada iyo Cabitaanka, ayaa lagu qabtay 18-kii Maajo Xarunta Caalamiga ee Shirarka iyo Carwooyinka ee Pudong oo ku taal Shanghai, Shiinaha. Bandhigyada cabitaannada daboolaya, waxyaabaha caanaha laga sameeyo, snac ...Akhri wax dheeraad ah »
Bishii Abriil, 2021 xaaladda suuqa Shiinaha ee liinta, xanthan xanjo
Waqtiga dhejinta: May-05-2021
Laga soo bilaabo 2021, qiimaha aashito ee Shiinaha ayaa kor u kacay, iyadoo koror sanad-sannadeed ah 60.81% marka loo eego 2020. Taasi waa 54.55% koror sanad-sannadeedka ah marka la barbar dhigo 2019-ka. 20-ka Abriil 2021-ka. ee aashitada liinta ee Shiinaha waxay bilaabeen inay xasiliyaan, laakiin qiimuhu weli ma uusan sii kicin. Jidka kor ...Akhri wax dheeraad ah »
Baasto kulul oo dhanaan ayaa leh mustaqbal ifaya suuqa adduunka
Tan iyo dhammaadkii 2020, weelkii ugu horreeyay ee noodle dhalooyinka kulul iyo dhanaan ee loo dhoofiyo Malaysia ayaa lagu iibiyay suuqa Malaysia. Tayada dhadhankeedu waxay ku guuleysatay raalli ahaanshaha iyo aqoonsiga macaamiisha. Macaamiilku wuxuu u wakiishay badeecada hay'ad xirfad leh oo loogu talagalay xayawaanka ...Akhri wax dheeraad ah »
Si guul leh loo soo saaray noodle muraayad kulul oo dhanaan ah oo loo dhoofiyay Malaysia
Kadib ku dhowaad laba bilood oo cilmi baaris iyo horumarin iyo tijaabin ah, Nofeembar 18, 2020, Jiaxing Ruisheng International Trade Co., Ltd. iyo warshadda hoose ee Anhui Three Brothers Potato Industry Co., Ltd. waxay si wada jir ah u soo saareen baastada kulul ee khudradda kulul iyo dhanaan ee u dhoofiyaan Malaysia. Soosaarahan ...Akhri wax dheeraad ah »
Mustaqbalka Mustaqbalka Noodleha Starch Instant
Saamaynta ay ku leedahay dhammaan warshadaha cuntada ee ku habboon, baastada macaan ee ku habboon ayaa caan ka ah macaamiisha da 'kasta ha lahaadeene jilicsanaantiisa, dhadhankeeda kala duwan iyo qiimaha nafaqada ee sarreeya Ku habboon, dhakhso leh oo hodan ku ah fiber-ka cuntada, fiitamiinnada iyo nafaqada kale. Natiijooyinka ayaa muujinaya in ...Akhri wax dheeraad ah »
Baadhitaan iyo falanqayn lagu sameeyo warshadaha qudaarta ee fuuq-baxa ah ee Shiinaha iyo saadaasha warbixinta Imtixaanka rajada suuqa (2018-2025)
Khudaarta fuuq baxday, oo sidoo kale loo yaqaanno fuuq celinta khudradda, waa khudradda cusub ka dib marka la maydho, la qalajiyo iyo wax soosaarka kale ee la soo saaro, inta badan biyaha ku jira khudradda ayaa laga sameeyaa oo laga sameeyaa khudaarta qalalan. ...Akhri wax dheeraad ah »
L - Phenylalanine (PHE), Zinc laaqic acid, L - Glutamine, Salad Fuuq bax ah, Taurine, Baastada,